२०१४ मा सपना बेचेका मोदी २०१९ मा असफलता बेच्दैछन् !
२०७६ बैशाख २ सोमबार ०५:४४:००
नयाँ दिल्ली । २०१९ को चुनावले २०१४ लाई पछि पारिसकेको छ । २०१९ को चुनाव २०१४ लाई भुलाउने चुनाव हो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रचार सामग्री हेर्दा उ २०१४ बाट भाग्दै गरेको देखिन्छ ।
अहिले नयाँ मुद्दाहरुको मार्केटिङ भइरहेको छ । यी पोस्टरहरुमा जबरजस्ती ट्यागलाइन राखिएको छ । पोस्टरहरुको भावले परीक्षामा उनुत्तिर्ण भएको विद्यार्थीले घरमा पुगेर दिने प्रतिक्रिया ‘सबै विद्यार्थीहरु अनुत्तिर्ण भए, यसपल्ट राम्रोसँग उत्तर पुस्तिका जाँच नै गरिएन’ भन्ने ढंगको देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बचेको राजनीतिक सफलता भनेको यही छ कि विपक्षका बाँकी नेता र उनको सरकार पनि फेल भएको थियो । फेल हुनेले एउटा अन्य काम पनि गर्दछ, घरमा सबै फेल भएको बताउँछ भने टोलमा आफू पास भएको झुट बोल्छ ।
आफ्नो रिजल्ट कसैलाई पनि देखाउँदैन । भारतको परिक्षा व्यवस्थामा सहभागी ५० प्रतिशतभन्दा बढी छात्रहरुको यही अवस्था हो । नरेन्द्र मोदीको पनि । यसैकारण जब तपाईं यस पटक भाजपाको चुनावी पोस्टर हेर्दा हैरान हुन सक्नुहुन्छ । र, खोज्नु हुन्छ कि २०१४ का नारा कहाँ गए ?
प्रचारहरुको कुनै प्रचार छैन । २०१४ मा मानिसहरु स्वयम् ती प्रचारहरुको प्रचार गर्दथे । सेनाको प्रयोग नभएको भए यो चुनावमा मोदीलाई आफ्नै पोस्टर लगाउनका लागि मुद्दा नै मिल्ने थिएन ।
आतंकवाद समाप्त गर्ने मोदी घुरी रहेको भान हुन्छ । हाजीपुरमा दीघा पुलभन्दा अगाडि लगाइएको अन्तरिक्षको सफलताको पोस्टर हेर्दा लाग्छ कि परिक्षामा अनुत्तिर्ण भएको विद्यार्थीले घर आएर आमालाई आफ्नो कापीको सट्टा अर्कै विद्यार्थीले लेखेको कापी देखाएको हो ।
२०१४ मा मोदीले सपना बेचेका थिए । २०१९ मा मोदी आप्mनो असफलता बेचिरहेका छन् । दिल्लीबाट जाने पत्रकार मानिसहरुको भीडमा मोदी–मोदीको आवाज खोजी रहेका छन् ।
२०१४ मा माइक निकाल्न नपाउँदै आवाज गुञ्जिन्थ्यो, मोदी–मोदी । २०१९ मा जनताको माझ माइक निकाल्दा आवाज नै आउँदैन । पत्रकार अचम्म पर्दछन् । मानिसहरु मिडियाका कारण पनि मोदी–मोदी भनिरहेका छैनन् । टीभीहरु दिन–रात मोदी–मोदी भनिरहेका छन् भने अब उनीहरुका लागि के नै बच्यो र ? मिडिया बिक्री भइसकेको छ । डराइसकेका छन् । केवल मोदीलाई मात्रै देखाइरहेका छन् ।
सबैले यो कुरा नबुझेका होलान तर तपाईंलाई यस्तो कुरा गर्ने मानिसहरु ठूलो संख्यामा हरेक प्रकारका भीड भेटिने छन् । युवादेखि वृद्धसम्म भनिरहेको भेटिने छन् कि मोदीको ‘मिडिया गोदी मिडिया’ हो ।
मिडियाकै विश्वसनीयता समाप्त भएको सुख्खा याममा मोदीको सपनाहरुको घाँस कति हरियो हुन सक्छ । यो कुरा मोदीका समर्थकहरु माथि भारी पर्न जान्छ । उनीहरु लज्जित हुन्छन् । त्यो गौरवका साथ मोदी–मोदी भन्न सक्दैनन् जसरी २०१४ मा गर्ने गर्दथे ।
मैले यो कुरा नतिजको सन्दर्भमा भनिरहेको छैन् कि मोदी पराजित हुने छन् । म न त कसैसँग यो प्रश्न सोध्छु र न त यसमा मेरो ‘दिलचस्पी’ नै छ । मेरो लेखको आशय हो– मोदी स्वयम्सँग पराजित भइरहेका छन् । २०१४ का विजेता जब स्वयम्सँग पराजित हुन्छन् भने मोदीलाई मतदान गर्न चाहने मतदाताको अनुहार हेर्न आवश्यक छ । मसिनो स्वरमा सोध्छन् के मोदीले एउटा पनि राम्रो काम गरेका छैनन् ।
मोदीका आलोचकहरुसँग धेरै सवालहरु छन् । उनीहरु २०१४ मा हरेक बहसमा हार्थेनन् भने अहिले हरेक बहसमा भाजपा समर्थकहरुलाई हराउन सफल भइहरेका छन् ।
उनीहरुको मतबाट मोदी पराजित नहुन पनि सक्छन् तर उनीहरुका सवालबाट मोदीका समर्थक बहस हार्न लागेका छन् । यसैकारण उनीहरु चुपचाप छन् । भाजपाका मतदाताहरुले यति छिट्टै मोदीको विकल्पको सवाल उठ्ला भनेर कल्पनासम्म गरेका थिएनन ।
जब कुनै नेता बाध्यताको विकल्प हुन्छ भने त्यो बेला जनता चुप भैदिन्छन् । उनीहरु एकअर्कासँग नजर जुधाउँदैनन् । २०१४ मा सबै एकअर्कासँग नजर जुधाउँथे भने मोदी–मोदीको नारा पनि लगाउँथे ।
मोदीलाई मन पराउने मतदाताहरु ह्वाट्सएपझैं अन्तरमुखी भइसकेका छन् । फेसबुकझैँ बाहिर बोलिरहेका छैनन् । ह्वाट्सएप युनिभर्सटीले उनीहरुको ‘क्यारेक्टर’ परिवर्तन गरिदिएको छ ।
पाँचवर्षसम्म किसिम–किसिमका झुट निली सकेपछि बान्ता गर्न सकिँदैन । झुटले उनीहरुलाई पहिले आक्रामक बनायो भने अहिले एक्लो बनाइदिएको छ । मोदीका समर्थक नेताको विकल्पमाथि छलफल गर्न तयार देखिएका छन् । यदि कसैले विकल्प दिनसके उनीहरु मोदीलाई छोडेर कुनै अन्य माथि छलफल गर्न तयार छन् ।
‘घर–घर मोदी’ को स्थानमा मोदी नभए अर्को को भन्ने प्रश्न उनीहरुको मस्तिष्कमा उठ्न सुरु भइसकेको छ । मतदाताले जमिनमा राजनीतिको यथार्थ बुझेको छ । उसले सबैलाई हेरिसकेको छ र मोदीको पनि परीक्षण गरिसकेको छ । मतदाताले के गर्ने ?
के मोदीमाथि विश्वास गरेको सजाय स्वयम्लाई दिने ? मतदाता झुट र प्रोपोगण्डाबाट छुटकारा चाहन्छ । यो चुनावमा उसँग २०१४ को जस्तै सपना छैन । यता न उता । पटक–पटक ठगिएको पीडा उ कसका सामु लिएर जाने ?
पत्रकार मोदीको पीडा बुझ्छन् तर जनताको पीडा बुझ्दैनन् । जनता समस्याकाबीच उभिएका छन् । मोदीलाई पनि जनताप्रति कुनै सहानुभूति छैन । उनी मतदाताको पीडालाई वास्ता नगरी पिउने पानी नभएको खेतमा अन्तरिक्षको सफलताको कथा सुनाउँदै हिँडेका छन् ।
यही कारण जनता विकल्पहरुमा सम्भावना देखिरहेका छन् । सबैले त्यो जनतालाई एक्लो बनाएका छन् । यसैकारण अहिले ‘मोदी–मोदी’ सुनिन छाडेको छ । तपाईं ‘रिजल्ट’ जान्न चाहनुहुन्छ तर जनता आफ्नो अवस्था बताउन चाहन्छ । यसकारण २०१९ को चुनाव स्तब्ध जनताको चुनाव हो ।